Shiinaha Aluminium Daawaha Qalabka Qalabka elektaroonigga ah Soo-saaraha iyo Alaab-qeybiye | DOWODA
Daawaha Aluminium ee qalabka elektaroonigga ah
magaca sheyga Qalabka aluminium ee aluminium nooca alaabta Qaybta dhijitaalka ah
Cilad bixinta mashiinka socodka CNC:
Nidaamka falanqaynta cilladaha korantada sidoo kale waa habka cilad bixinta. Sidaa darteed, qaar ka mid ah hababka cilad-bixinta guud ee cilladaha korantada ayaa si dhammaystiran loogu soo bandhigay hababka falanqaynta ee kor ku xusan. Hadda, dhowr ciladood oo koronto caadi ah ayaa ku qoran.
1. Awood siinta Awoodda korontada waa isha tamarta ee howlaha caadiga ah ee nidaamka dayactirka iyo mashiinka socodka ee CNC oo dhan. Haddii ay guul darreysato ama ciladdu yar tahay, waxay waayi doontaa xogta waxayna keeni doontaa xiritaanka. Xaaladaha daran, waxay burburin kartaa qayb ama dhammaan nidaamka.
Wadamada reer galbeedku waxay leeyihiin awood ku filan iyo tayo sare oo shabakad ah, sidaa darteed tixgelinta naqshadeynta nidaamka awoodooda ayaa ka yar. Tani wax yar kuma filna shabakadaha bixinta korontada oo leh isbeddello waaweyn iyo iswaafajin sarreysa ee Shiinaha. Cunsurro, waa lama huraan inay jiri doonaan fashilaadyo ka dhasha korontada. Waa inaan isku daynaa sida ugu fiican ee aan ugu talagaly inaan naqshadeyno nidaamka korontada siiya mashiinka socodka muhiimka ah ee CNC:
Bixiyaan sanduuq wax lagu qaybinayo oo madax bannaan iyada oo aan qalab kale oo taxane ah loo adeegsan;
Waxaa jira dhul wanaagsan bilowga korontada;
Meelaha tayadoodu liidato ee korantada waa in lagu qalabeeyaa aalado dejiya AC danab saddex-waji ah;
④ Qaab dhismeedka qaybaha korantada ee golaha wasiirada iyo dhigida fiilooyinka AC iyo DC waa in lakala fogeeyaa midba midka kale.
Supply Qalabka saddexda waji ee galaya mashiinka socodka ee xudunta u ah CNC waa inuu qaataa sedex waji nidaam shan-silig ah, dhexdhexaadka (N) iyo dhulka (PE) si adag ayaa loo kala saaraa;
2.) Wareegga booska ee nidaamka socodka CNC waa cilad
Alarm Qaylo-dhaanta booska. Waxay noqon kartaa in wareegga cabbirka boosku furan yahay; curiyaha cabbiraadda ayaa dhaawacmay; calaamadda is-dhexgalka ee ay dejisay xakamaynta boosku ma jirto.
Ax dhidibka iskuduwaha wuxuu ku socdaa amar la'aan. Waxay noqon kartaa in socodka uu aad u ballaaran yahay; wareegga booska ama xawaaraha loop wuxuu ku xiran yahay jawaab celin wanaagsan; fiilooyinka jawaab celinta waa furan yihiin; curiyaha cabirka Cadadku way dhaawacmaan.
3. Barta eber ee iskuduwaha mashiinka socodka CNC lama heli karo. Waxay noqon kartaa in jihada eber ay aad uga fog tahay barta eber; encoderku wuu dhaawacmay ama fiilooyinku way furan yihiin; calaamadda dhibcaha eber ee jiinga ayaa loo wareejiyay;
Xawaaraha xawaaraha ayaa fashilmay.
4. Astaamaha firfircoon ee mashiinka xudunta u ah NC wuu sii xumaanayaa, tayada qalabka shaqada ayaa hoos u dhacaya, mashiinka udub-dhexaadka ah xitaa wuxuu ku gariirinayaa xawaare joogto ah. Wax badan oo noocan ah ayaa jira
Farqiga nidaamka gudbinta farsamada ayaa aad u weyn ama xitaa xiran, ama tareenka hagaha si ku filan looma shubin ama loo duugin; waxay noqon kartaa wareegga xawaaraha ee nidaamka korantada lagu xakameeyo
Wareegga booska iyo xuduudaha la xiriira kuma sii jiraan gobolka ugu habboon, waana in dib loo habeeyo mar kale ka dib markii cillad farsamo asal ahaan laga takhaluso.
5. Mararka qaarkood cillad-darrada. Halkan waxaa ku yaal laba xaaladood oo suurtagal ah: - Hal xaalad ayaa ah in dhibaato ku jirta barnaamijyada la xiriira software-ka
Xiritaanka cillad la'aanta isku dhafka hawlgalka iyo hawlgalka shaqada ayaa guud ahaan baaba'aya ka dib marka mashiinka muhiimka ah ee CNC la demiyo ka dib marka korontada la xiro; xaalad kale waxaa sababa xaaladaha deegaanka
, Sida faragalin xoogan (shabakada ama qalabka durugsan), heerkulka xad dhaafka ah, qoyaan xad dhaaf ah, iwm. Qodobkaan deegaanka inta badan dadku waa iska indhatiraan, sida
Mashiinka maskaxda waxaa la dhigayaa dhisme warshad caadi ah ama xitaa meel u dhow "weyn" furan, golaha wasiirrada korontaduna wuu furan yahay muddo dheer, waxaana ku yaal qalab badan sida boodh wax soo saar leh, xiirashada biraha, ama ceeryaamaha biyaha.
Sug Waxyaabahani ma sababi doonaan oo keliya guuldarro, laakiin sidoo kale waxay dhaawac culus u geysan doonaan nidaamka mashiinka socodka. Hubso inaad fiiro gaar ah u yeelatid hagaajinta.
Hore: Qalabka isgaarsiinta ee aluminium
Xiga: Qalabka birta xaashida ah
Qolof qolof bir bir
CNC noocooda ka baaraandegidda processing processing dhakhso ha ...
Nooca aluminium ee aluminium
Qaybaha aluminium ee aan caadiga ahayn
5 dhidibka CNC Lathe, CNC ahama Steel Processing, Qalabka Qiimeynta Cnc, Guddi Gacmeedka CNC, Farsamaynta Xarunta Mashiinka Cnc, Shell Qalabka Qalabka,